२४ घण्टामा थपिए ३५ सय ५६ कोरोना संक्रमित, १२ को मृत्यु। काठमाडौं छोडेर जान चाहानेलाई दुई दिन समय दिने । – Paluwa Khabar
बैसाख १३, २०७८ सोमबार 153
१३ बैशाख, काठमाडौँ । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३ हजार ५५६ जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । यससँगै नेपालमा कूल सङ्क्रमितको सङ्ख्या तीन लाख ३ हजार ५६१ पुगेको छ।
गत २४ घण्टामा ३७८ जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। योसँगै निको हुनेको सङ्ख्या दुई लाख ७७ हजार ९५१ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।गत २४ घण्टामा कोरोनाबाट थप १२ जनाको मृत्यु भएको छ । यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या ३१७६ पुगेको छ ।
त्यसै गरि स्वास्थ मन्त्रालयले बैशाख १५ देखि काठमाडौं उपत्यकामा निशेध आग्या लगाउन गरेको सिफारिस मन्त्रीपरिषद ले पारित गरेको छ। काठमाडौंमा बसोबास गरेका विद्यार्थी हरु र ब्यबसायीलाई पनि उपत्यका छोडेर जान चाहानेको लागि दुई दिन समय दिने बताइएको छ भने आन्तरिक उडान र लामो दुरिका यातायात साथै होटेल पनि बन्द हुने समाचारमा उल्लेख छ। यो समाचार को भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला।।
Prevआमाको अगाडि छोरो छट्प’टाउँदै म’र्दा कति द´र्द भयो होला ?
Nextअस्पतालले उपचार सम्भव छैन भनेर फ’र्काइदिएपछि गं’भीर घा’इते जानुकाको मृ’त्यु
प्रचण्ड बैठक सकेपछि हान्निएर किन पुगे माधव नेपालको घर ? यस्तो छ रहस्यमय कारण